Fanafihana sinoa :: Nodimandry ilay lehiben’ny Zandarimaria voatifitra • AoRaha
Fanafihana sinoa Nodimandry ilay lehiben’ny Zandarimaria voatifitra
Namoy ny ainy, omaly tokony ho tamin’ny 12 ora sy sasany, teny amin’ny hopitaly Soavinandriana, ilay lehiben’ny Zandarimaria, any Befandriana-Avaratra izay voatifitr’ireo jiolahy nanafika mpandraharaha sinoa tany an-toerana, tamin’ny alin’ny 29 jolay lasa teo. Niezaka nanavotra azy ireo ny mpitsabo teny amin’ny hopitaly tamin’ny fandidiana sy fanesorana ireo bala niparitaka tao anatin’ny vatany saingy tsy avotra ny ainy, sivy andro aty aoriana.
Notafihin’ny jiolahy miisa enina nitondra basy ny mpandraharaha sinoa iray mpividy lavanila ao Befandriana Avaratra, tamin’ny alin’ny 29 jolay io. Naheno ny fanafihana ilay lehiben’ny Zandarimaria dia nihazo ny toerana niaraka tamin’ny zandary iray hafa. Teny an-dalana izy ireo no nifanena tampoka tamin’ireo jiolahy nikasa hitsoaka rehefa nahazo vola 60 tapitrisa ariary. Nisy ny fifampitifirana izay nahavoa an’io lehiben’ny Zandarimaria io. Lavon’ny balan’ireo zandary ny iray tamin’ireo jiolahy.
Isan’ireo voatifitry ny jiolahy ny Ben’ny tanànan’i Belalona, tompon’ny trano nipetrahan’ilay mpandraharaha. Niara-novonjena tamin’ny helikoptera nalaina tany Befandriana-Avaratra izy sy ilay lehiben’ny Zandarimaria ary samy notsaboina teny amin’ny hopitaly Soavinandriana. Namoy ny ainy tamin’ny 1 aogositra lasa teo io Ben’ny tanàna io.
Efa voasambotr’ireo zandary ny telo tamin’ireo jiolahy. Mbola tra-tehaka tany amin’ireo ny vola roa tapitrisa ariary mahery.